14 oru ohuru nke aga-ewebata n’ime ulo oru nchekwa ndi Turkey | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 Ankara14 oru ohuru nke aga-ewebata n’ime ulo oru nchekwa
18 / 09 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Turkey
a ga-ewebata oru ngo ohuru na uloru nchekwa
Ihe ngosi ohuru nke ulo oru nchekwa - International Military Radar na Summit Security Summit - MRBS, 2 na-akwado imepe uzo ya n’October. Ihe omume ohuru nke ulo oru ulo na nke mba, nke bu n’uzo iru ijeri 10 ijeri n’aho n’aho n’azu, ka aga egosiputa ya na mbu na MRBS
N'okpuru nkwado nke Mịnịstrị nke ime obodo, Ministry of National Defense, Defence Industry Presidency, Njikọ aka na Nchịkwa Turkey (TIKA) na Ankara Governorate na-akwado nke MUSIAD Ankara 2. International Military Radar na Summit Security Summit (MRBS) ka ewepụtara ọha na eze na nnọkọ.
2 - 3 MUSIAD Ankara Onye isi ala Hasan Basri Acar kwuru nkwupụta dị mkpa banyere MRBS nke ga-eme na Hilton Garden Inn Ankara na Ọktọba.
Ọgbakọ pịa; Ndi Mkpokoro nke Ankara Ngalaba na Business Development Vice A. A. Bahaddin Meral, onye isi oche MUSIAD Ankara Defense Industry and Aviation Sector Board Chairman Fatih Altunbas na MUSIAD Ankara Press, Broadcast na Media Sector Board Chairman Burhan Varol sonyekwara.
Nnukwu mmasị na MRBS mere ka uto 2,5
MUSIAD Ankara President Hasan Basri Acar, onye kwuru na ha nọ n’ụzọ iji kpaa mkparịta ụka kacha mkpa n’ihe gbasara radar na nchekwa nchekwa, iji hụ na ngosipụta nke ngwaahịa teknụzụ kachasị ọhụrụ na ime ka ndị na-eme ihe na ndị na-eme mkpebi, ka iwelie ike azụmahịa nke mpaghara ahụ n’ahịa ụlọ na nke mba ọzọ. 2,5 tụnyere afọ ha agbasawo na nnukwu ikpo okwu nke ụlọ ọrụ nchekwa agbasapụta. Acer; Uz Ọ ga-amasị anyị ịkele onye ntorobịa nke ime obodo Maazị Süleyman Soylu maka nkwado ya, meyen kwuru.
Ngalaba 10 tolite ijeri dollar 55 kwa afo
N'ikwu na Ankara na-anọchite anya 80 nke ụlọ ọrụ nchekwa, Hasan Basri Acar kwupụtara na ha ga-ejikọta akụkụ niile nke mpaghara ahụ na Isi Obodo yana nchịkọta nke lekwasịrị anya radar na nchekwa nchekwa, nke mejupụtara ihe kachasị mkpa nke obodo anyị na ngalaba ọrụ nchekwa. Acar kwusiri ike na ụlọ ọrụ nchekwa ga-edekọ uto nke ihe dị ka ijeri dọla 10 na afọ 55 na-esote ya, ma o kwesịrị ịbawanye mbupụ ya maka ebumnuche a.
14 sitere na oru ngo ụlọ
Acar kwusiri ike na a ga-ewebata ọrụ ụlọ ọrụ nchekwa obodo dị mkpa na nnọkọ a. Acar, 14 oru ngo ohuru nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na - eduzi ndị ọrụ dịka ASELSAN, DEKOM, STM, HAVELSAN, Turaç, Scandium, HTR, FNSS, Nurol Makine, METEKSAN na National Defense kwusiri ike.
A ga-atụle S-400 maka oge mbụ na MRBS
N'ịkọwapụta na ihe kpatara S-400 ngwa ogu ana-atu atu, nke bu otu n’ime ihe di nkpa n’agha nke ala anyi, ka anakwere dika ikuku ikuku karie n’ime uwa nile, bu radar, Acar kwuru na aga-atule usoro radar nke S-400 na MRBS nke izizi n’obodo anyi. N'ịkọwa na radar S-400 ekwesighi ka ọ dịrị n'akụkụ ya ma ọ gaghị enwe ike ịchọpụta ya, Acar kwuru, S S-400, usoro nchekwa ikuku ikuku, agaghị ekwe ka ụgbọelu ndị mmụọ na-aga ije na mpaghara anyị. Ọ ga-amasị anyị igosipụta ekele anyị nye ndị isi niile, ọkachasị Hulusi Akar, Mịnịsta na-ahụ maka nchekwa mba, onye gbara mbọ dị ukwuu iweta usoro a na mba anyị. ”
Turkish na Afghan imekọ ihe ọnụ na-echebe ụlọ ọrụ ga-tọrọ
N’igosi na ha emeela ka njikọ mba na ogbako a n’afọ a, Acar kwusiri ike na ndị nnọchi anya dị mkpa si Afghanistan ga-esonye na Mgbakọ ahụ. Acer, Afghanistan Presidential National Security Council, onye na-anọchite anya ndị Ministry of Defense, ọha ọchịchị, onwe oru na-egosi ga-eme n'ọdịnihu nke a pụrụ iche mbon na Turkey na MRBS na-anọchite anya na mahadum. N’ịkọwapụta na ha na-atụ anya na njikọta azụmaahịa na akụ na ụba dị n’etiti mba abụọ ga-aga na ụlọ ọrụ nchekwa, Acar kwusiri ike na a ga-atụle ihe ga-ekwe omume imekọrịta ihe n’etiti mba abụọ a.
Ngalaba ahụ na-echere maka enyemaka na nkwado
Acar kwuputara nsogbu ndị dị na atụmatụ nke ngalaba ahụ, dịka mba na -emepụta ngwaahịa ikpeazụ, kwuru na anyị chọrọ ụlọ ọrụ nchekwa n'ụlọ. Acar kpọkwara ndị obodo anyị itinye ego na ụlọ ọrụ nchekwa maka ndị ọchụnta ego nwere ikike ụfọdụ. Ọ kọwara na ha na-atụ anya ka e belata iwu gọọmentị na-enye aka na nkwado ka mpaghara ahụ wee ruo n'ọnọdụ ga-egbo mkpa mba ndị enyi na mmekọrịta niile, ọkachasị mba anyị. Acar gosiputara na n'ihi ihe pụrụ iche nke ụlọ ọrụ nchekwa, ịbawanye mbupụ nke ụlọ ọrụ n'okpuru nkwa gọọmentị dị oke mkpa.
Akwụ ụgwọ ekwe ukwu nke mpaghara ahụ
Acar, ụlọ ọrụ nchekwa na ngwaahịa nke emepụtara site na ịnwale ụgwọ dị oke njọ, na-emetụ aka n'okwu a, ụlọ ọrụ ntọala na-ejikọ aka na nkwado nke steeti iji nye ogige ule ga-eweta uru dị ọnụ, o kwuru.
Acar kwusiri ike na ndị ọrụ ruru eru bụ nyocha kachasị ukwuu nke ụlọ ọrụ nchekwa, ekwesịrị ịchọpụta mkpa nke ụlọ ọrụ, mahadum na njikọta ọha na eze na usoro mmemme kwesịrị ekwesị ngwa ngwa, o kwukwara. Acar, ndi okacha n’ileputa ulo ogwu ga acho ime ka Ankara na Anatolia meputa onodu azumahia nke ndi nwe ya na ndi isi ya di nkpa iduta ndi oru aka karie nke oma.
A ga-ewebata Ụlọ Nzukọ Ọgbọ Ndị Ọzọ
ASELSAN Na-eme ka Nchekwa Ọnụ na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè
Ezigbo ụlọ ahịa ASELSAN na ndị ọkachamara si n'aka Bursa
Defense Mmegharị Nnọkọ ugboala ụgbọ elu ve
KARDEMİR Ogo maka Akụrụngwa Akụrụngwa na Nchekwa…
A ga-ebugharị ụgbọ okporo ígwè na InnoTrans 2018
Nzukọ ngosi nke Mersin Metro ga-eme…
Ebube Ọgbọ Ọhụrụ nke Mba
Securitylọ Nchebe Obodo
Ụlọ Ọrụ Nchekwa Mba
S-400 ngwa ogu ana-atu atu
Ihe oru ohuru nke 14 na ulo oru nchekwa
International Rada Radar na Summit Security Summit